Haddii aad qaaday video ah oo xaflad gaar ah ama wax kaleeto oo aad video Cam, waxaa jira fursad aad u rabto in aad u geliyaan on websites warbaahinta bulshada ama goobaha video qaybsiga sida ugu dhaqsaha badan. Laakiin waxa aad doonaysid in aad samaysid haddii aad diiwaanka cam video video file la soo saarka in lama jaanqaadi ugu warbaahinta bulshada website ciyaartoyda ah? Easy ... rogo file a in la taageero karaa iyadoo ciyaartoyda ay warbaahinta!
Inta badan video kamaradaha qeexitaanka sare leeyihiin qaab MTS sida qaab wax soo saarka, iyo goobaha video qaybsiga ugu sida Facebook inayna ku taageeri karaan. Mid ka mid ah barnaamijyada software ugu wanaagsan ee ay dadku u isticmaalaan maanta si loogu badalo ay MTS video files leh waa Aiseesoft MTS Converter, tani waa software in kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo qaab video kasta oo si qaab kale, iyo tan waxaa ka mid ah qaabab file MTS. Haddii aad rabto in aad isticmaasho software si loogu badalo video kuu gaar ah files, halkan waxay leedahay Hanuuniye tallaabo-tallaabo ah sida loo isticmaalo barnaamijkaan:
Talaabada 1: Download Barnaamijka
Download software ka website-ka rasmiga ah Aiseesoft, waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad lacag la'aan ah ama aad ka faaiidaysan karaan nooca buuxda ee $ 35 oo keliya.
Tallaabo 2: Ku dar File (yada) aad rabto in Beddelaan
Marka aad samaysay degsado iyo ku rakibidda software ah si aad u computer, si fudud u laban laabo guji icon si ay u abuurtaan iyo marka ay furan, riix badhanka Add File in uu ku hoos yaal ay logo dhinaca bidix ee sare ee shaashadda.
Talaabada 3: Dooro Qaabka ugu
Talaabada xikta waa inaad doorato qaabka aad rabto in aad file si loogu badalo faylka video (s) in, in muunad tan aan u isticmaalno MPEG-4 ama mp4, qaab tani waxaa taageeray ugu video qaybsiga website by, si ay tani tahay qaab wax soo saarka fiican ee diinta aad file video (s). Marka video diyaar u yahay, si fudud u riix badhanka loogu badalo in waxa uu ku yaalaa dhinaca midig ee suuqa kala software ah ee.
Wareejinta waa inay qaataan oo kaliya dhowr daqiiqo dhammayn, laakiin dabcan, waxaa had iyo jeer ku xiran tahay tirada file aad diinta, faylka ugu weyn, ugu dheer in aad sugto in la badaley. Marka lagu sameeyey 100%, riix buuxiya - badhanka ugu danbeysay ee ay xaq u hooseysa ee suuqa kala soo celiyaa.
Waxa la sameeyo haddii Aiseesoft ma at dhan shaqeeyaan? -Try Ay ka duwan: Wondeshare Video Converter Ultimate
Waxaa jiri doona markasta dhibaato la Aiseesoft MTS Converter, sida shil ama aan shaqayn dambe. Haddii aad rabto in aad isticmaasho software kale Converter in sidoo kale waa u fududahay (ama dhab ahaantii ka hawl yar) si ay u isticmaalaan, ka dibna waxa kale oo aad isticmaali kartaa Wondershare Video Converter Ultimate sida kale u weyn in Aiseesoft MTS Converter. Sida Aiseesoft, Wondershare sidoo kale sameeya shaqada si fiican u ah iyo in ka badan.
Labada bixiyaan qaababka tafatirka aasaasiga ah oo kaa caawin user si kor loogu qaado video ay si weyn. Waxay sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si loogu badalo file ah oo wuxuu galay kasta oo ku dhawaad ​​qaab file video aad u baahan tahay ama aad doonayso.
Labada ka mid ah video converters bixiyaan hab aad u sahlan si aad u awoodo inuu ciyaaro wax video files aad rabto qalabka ama codsi kasta oo aad qabto. Sida inta badan qalabka iyo barnaamijyadooda leeyihiin door bidaan nooca file ay shaqsi, isagoo nooca file haboon qalabka aad isticmaalayso ama in la isticmaalo waa mid aad u muhiim ah haddii aad jeclaan lahayd inaad ku raaxaysato arkaysid video sida sida aad u waa in.
Converters Aiseesoft iyo Wondeshare Video aadan kaliya ha aad u files cusub oo la ciyaari doono nooc kasta ama nooca qalabka aad haysato - oo sidoo kale ay horumarin karaan faylasha aad u baaxadda screen gaarka ah ee qalabka, xalka iyo waxyaalo kale oo gaar.
Laakiin taas oo ka dhexeeya labada waa lagu kalsoonaan karo waxayna u maleeyeen in la tixgeliyaa marka sugaya file ugu fiican MTS badaley? Halkan waxaan ka dhigay kooxda la barbardhigo dhinac ee labada video converters marka ay timaado qaababka ay:
Duwan ✓ ✓
Tayadoodii u gaar ah Devices ✓ ✓
Tayadoodii Video Sharing ✓ ✓
Video Faalladaada ✓ ✓
Bedelaada Faylal ay si kasta Software Video Faalladaada ✓ ✓
Sidaas awgeed, Wondershare cad fiican in la isticmaalo ka badan Aiseesoft sababtoo ah waa ka sii habboon in la isticmaalo. First Wondershare kuu ogolaanaya in aad si fudud u soo bixi wax kasta oo videos toos ah uga soo websites video qaybsiga sida YouTube iyo vimeo oo si toos ah loogu badalo ka software wuu soo celiyaa, waxa ay sidoo kale u oggolaadaan Wi-Fi .Wadashaqayntaas in Aiseesoft video Converter ma aan samayn karo.
Wondershare Laftiisa soo bandhigayaa aad u wanaagsan marka ay timaado qaababka ay aasaasiga ah. Markaan si kooban, waxaad heli doontaa brand file cusub kartoo ujeeddooyin wax.
Tani software cajiib bixisaa kala duwan ee wax soo saarka noocan profiles preprogrammed uu ka soo xusho. Waxay ka dhigan tahay inaadan u baahan tahay in aad ku dhumin waqti badan la qabsado waxyaabaha sida xal, heerka jir, iyo heerka yara. Profile kasta oo la heli karo waa shakhsi codsiyada ama qalab gaar ah.
Marka ay timaado in interface ah, Wondershare video Converter cad ayaa fiirin fiican iyo waa u fududahay in ay maraan badan Aiseesoft video Converter taasoo noqon kartaa mid adag in la isticmaalo.
Wondershare Ka kooban qalab iyo muuqaalada ku filan si ay u noqon on top ka mid kale converters video sida Aiseesoft. Waa arrin aad u user-friendly oo kuu oggolaanaysa in aad si dhab ah loo abuuro file video in aad u baahan tahay. In eray, waxaa fiican soo celiyaa aad ka iibsan karaan oo soo dajiyo si aad u computer ee suuqa maanta.
> Resource > bedelan karo > Sida loo rogo ama MTS Videos la Aiseesoft MTS Converter